Wafdi ka socda Baarlamanka Burundi oo Muqdisho yimid – idalenews.com
Wafdi ka socda Baarlamanka Burundi oo Muqdisho yimid
Wafdi ballaan oo ka socday Baarlamaanka dalka Burundi ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo soo dhaweynta wefdiga kadib ay faah faahin ka bixiyeen u jeedada Imaanshahooda Soomaaliya.
Wafdigan ka socday Baarlamaanka dalka Burundi ee uu hoggaaminayey Guddoomiyaha guddiga Difaaca oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey mudaneyaal ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta wefdiga kaddib ayey kulanka wada qaateen labada qeybood ee xubinihii ka socday Baarlamaanka Soomaaliya iyo Burundi, iyagoo ka wada hadlay sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirkii u dhaxeeyey labada Baarlamaan iyo arrimo kale.
Wariyeyaasha waxaa la hadlay Xildhibaan Maxamed Axmed kulan, oo ka tirsan guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Soomaaliya, isaga oo ku soo dhaweynaya wefdiga dalka ay saaxiibada yihiin ee uga yimid dalka Burundi Soomaaliya, waxa uu carrabka ku dhuftay in tani ay soo xasuusineyso tariikhdii Soomaaliya iyo Burundi oo uu tilmaamay in ay gacan weyn siin jirtay dowladdii dhexe ee bur burtay dowladda Burundi.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga Difaaca Baarlamaanka Burundi Hakizimna Emilien oo wefdiga hor kacayay ayaa sheegay in ay aad ugu f araxsan yihiin imaashahooda Muqdisho, isla markaana sida horey loo sheegay in taariikh dheer ay wada leeyihiin labada dal, iyado oo ay hadda Soomaaliya ku suga yihiin ciidammo dalkooda ka socda oo AMISOM ka tirsan.
Wafdigan xildhibaannada ah ee ka socda Baarlamaanka Burundi waxa ay malinto burrito ah kulammo la qaadan doonaan masuuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale guddiyada Baarlamaanka uu ka kooban yahay, waana markii ugu horeeysay ee xildhibaanno ka socda dalka Burundi ay yimaadaan muddo aad dheer kaddib.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Finalka Qaramada Afrika Nigeria v Burkina Faso.